"Miomàna hihaona amin’Andriamanitrao. " Amosa 4:12
"Raha manaiky an’i Jesosy ho Tompo amin’ny vavanao ianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty, dia hovonjena ianao. " Romana 10:9
Vao maraina io i Vero dia nahazo antso nilaza vaovao ratsy taminy. Tojo, tovolahy iray niara-nikorana taminy sy ny namany omaly hariva, dia maty tamina lozam-piarakodia raha nandeha nody. Tsy nahetsika i Vero, ary toa hitany i Tojo, mbola faly sy navitrika erỳ omaly, kanefa androany … maty. “Loza izany !” hoy izy moramora. Nivadi-po izy, nieritreritra hoe: “Ary raha niaraka taminy tao anaty fiarakodia moa aho…” Tampoka teo dia nisy antso avy any ivelany nanaitra azy: “Vero a ! vonona ve indrỳ?” Izay ny feon’ilay mpiara-miasa aminy, mandalo isa-maraina haka azy.
“Tsia, mbola tsy vonona aho, andraso kely”, hoy izy namaly.
“Vero a ! vonona ve indrỳ?” Fanontaniana mahazatra apetrak’ilay mpiara-miasa aminy isa-maraina, nefa nanjary nanana dikany hafa tanteraka tamin’io fotoana io! Toy ny hoe olon-kafa no niresaka taminy, ary mikasika zavatra hafa tanteraka, dia ny fahafatesany. Vonona ve izy ny ho faty, ary vonona ny hihaona amin’Andriamanitra? Nandalo teo anatrehany avokoa ny fahadisoany, ny hajejoany, ny maha poaka aty ny fiainany, ny tsy fananany antoka ny amin’ny any ankoatra.
Afaka mamaly izany fanontaniana izany i Vero ankehitriny, satria efa nametraka tamin’i Jesosy Kristy ny fatokiany sy ny finoany. Azony antoka fa Jesosy, Ilay Mpamonjiny, efa nandamina ny hoavin’ny fanahiny, tamin’ny nitondrany ny fahotany teo amin’ny hazofijaliana, koa dia afaka miteny izy hoe: “Eny, vonona aho”